အသံတု ရဲမြင့်လေး ကွယ်လွန်
Breaking News , May 24, 2020
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ရုပ်ရှင်သက်ကြီးကန်တော့ခံ အသံတုဝိဇ္ဇာ သရုပ်ဆောင် ရဲမြင့်လေးသည်မေလ၂၄ရက်ညနေ၅နာရီကသာကေတနေအိမ်၌ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက် သွားကြောင်းသိရပါတယ်။
အမြန်လမ်းပေါ်မှာ မီနီဘတ်စ်တစ်စီး ဂတ်ဝေးတန်းကိုဝင်တိုက်
၂၄.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၊ ညနေ ၅ နာရီ ၂၀ အချိန်ခန့် မှာ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၄၈/ဝ)နှင့် (၁၄၇/၇)အကြားတွင် မီနီဘတ်(အဝါရောင်) ယာဉ်သည် ဂတ်ဝေးတန်းအား ဝင်ရောက်တိုက်မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ယာဉ်မတော်တဆမှုကို ဗောဓိကုန်းအမြန်လမ်းမီးသတ်စခန်းမှ သွားရောက်...
ရှင်ဥပဂုတ္တကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဖောင်တော်ရေချပူဇော်၍ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်သို့ဒေသစာရီကြွချီ
ရှင်ဥပဂုတ္တကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဖောင်တော်ရေချပူဇော်၍ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်သို့ဒေသစာရီကြွချီ ၂၄ . ၅ . ၂၀၂၀ ရက် မနက် ၇ နာရီ မှာ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်းတွင် ရှင်ဥပဂုတ္တကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဖောင်တော်ရေချပူဇော်၍ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်သို့ဒေသစာရီကြွချီတော်မူခြင်း...
“sky net interviewမှာ ph messangerနဲ့မို့အရိပ်ကျသွား လို.ဦးဇော်မျက်နှာမဲသွားတာပါ “
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ-၂၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသမှုပြီးဆုံး၍ ကျန်းမာစွာဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ မန္တလေးမြို့သို့ မေလ ၂၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ပြန်လည်ရောက်ရှိပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ကာလ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ. Mask ပြိုင်ပွဲမှာရရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဆုရှင်များ
စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကောင်းဆုံး ရည်ရွယ်ချက်ဆုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာ့ကြောင့် ကျွန်မ ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကို အနည်းငယ် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ပထမ၊ Shin Nyein Mei။ မေတ္တာကို အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးထားခြင်းကိုအလွန်သဘောကျမိပါတယ်။ လောကကြီးအလိုအပ်နေဆုံးက မေတ္တာမဟုတ်ပါလား။ ဒုတိယ၊ Kyaw Thu။...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ. mask ပြိုင်ပွဲဆုရ ဓါတ်ပုံများ။
Breaking News , May 23, 2020
ပြည်သူအကျိုးပြုဆုများ။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က လက်ခံနိုင်တဲ့အပြင်၊ အများပြည်သူအတွက် လှူဒါန်းရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ထားခြင်းနဲ့ like အများဆုံးရရှိထားခြင်းတို့အပေါ် အခြေခံပြီးရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ပထမ၊ Daw Kyi Kyi Win။ ဒုတိယ၊ May Phyu...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကျန်စစ်သားလမ်းမှာ တစ်ဦးချင်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေး။
ဒီကနေ. ၂၃ . ၅ . ၂၀၂၀ ရက် မနက် ၉ နာရီမှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေကို Covid – 19 ရောဂါ ကူးစက်မှုမရှိရေး Contact...
Breaking News , May 22, 2020
အဂတိလိုက်စားမှု လေးမှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရတဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို အမှု သုံးခု အတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီ ကျခံရန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တရားရုံးက အမိန့် ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်...
မန္တလေး ဈေးချိုတော် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ယာယီပိတ်ထားသော မန္တလေးမြို့ ဈေးချိုတော်ကို မေလ ၂၂ ရက်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း စျေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ဈေးချိုတော် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေ စစ်ဆေးခြင်းကို...
ကော့သောင်း မှတဆင့်ပြန်ဝင်လာသူ ၁၀၀ ဦး မော်လမြိုင်ရောက်
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀၀ ဦးတို.ဟာ မနေ.ကညနေ ၄နာရီမှာ ကော့သောင်းမြို.မှ တဆင့် မော်လမြိုင်မြို.ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ အဲဒီ ပြည်တော်ပြန်တွေထဲက မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ နေထိုင်သူ ၃၁ ဦးကို မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ်ရှိ...